ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၄ ခု နိုင်ငံခြားငွေ လွှဲခွင့်ရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၄ ခု နိုင်ငံခြားငွေ လွှဲခွင့်ရ
ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၄ ခု နိုင်ငံခြားငွေ လွှဲခွင့်ရ
Posted by chityimhtoo on Dec 26, 2011 in Creative Writing, News |3comments
ပည်တွင်းဘဏ် လေးခုကို ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့ကနေ ပြည်တွင်းငွေ လွှဲပို့မှု လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေဆီက အခွန်မကောက်တော့ဘူး ဆိုပြီး အစိုးရက ကြေညာပြီးနောက် အခုလို ဘဏ်တွေကနေ ငွေလွှဲလို့ ရလာမယ်ဆိုတဲ့အတွက် ပြည်ပ ထွက်ခွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပြည်တွင်း ငွေလွှဲပို့တဲ့အခါ ပိုပြီး လွယ်ကူလာနိုင်မလား ဆိုတာကိုတော့ မသိင်္ဂီထိုက်က ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြသူတွေနဲ့ မေးမြန်းထားပါတယ်။
ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ဘဏ်လေးခုကို ပြည်ပကနေ ပြည်တွင်းငွေလွှဲ လုပ်ကိုင်ခွင့် ဗဟိုဘဏ်က ချထားပေး လိုက်တဲ့အကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာကနေ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ကြေညာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသား သန်းနဲ့ချီ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွေက ကနဦး စတင် ခွင့်ပြုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့် လိုင်စင်ရ ဘဏ် ၁၁ ခုထဲကနေ အစိုးရပိုင် သမဝါယမဘဏ်၊ ဆရာကျောင်းလို့ လူသိများတဲ့ ဦးအောင်ကိုဝင်းပိုင် ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ ဦးတေဇပိုင် အာရှစိမ်းလန်းမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နဲ့ ဦးဇော်ဇော်ပိုင် ဧရာဝတီဘဏ်တို့ကို ရွေးချယ်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဘဏ်တွေအနေနဲ့ နေ့စဉ် နိုင်ငံခြားငွေ ပေါက်ဈေးအလိုက် လဲလှယ်ပေးနိုင်မှပဲ ပြည်ပကနေ ငွေလွှဲသူတွေ အတွက် အဆင်ပြေမယ်လို့ မလေးရှား အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူ ကိုထွန်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
“နေ့စဉ်ငွေလွှဲခကို အပြောင်းအလဲပေါ်မှာ အတက်အကျပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ဘဏ်တွေကနေပြီးတော့ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရပ် ဒီနိုင်ငံသားတွေရှိတဲ့ အရပ်တွေကို လွှဲပေးနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါ အင်မတန် ကောင်းတယ်။ ဒီကလွှဲပေးတဲ့ပိုက်ဆံကို ငွေမာပေါ့နော်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဥရောပ ယူရိုငွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ ထည့်ပြီးတော့ သိမ်းထားလိုက်ရင် အဲဒီအပေါ်မှာ အတိုးရမယ်ဆိုရင် အဲဒါ ပိုကောင်းတယ်။ အလုပ်သမားတွေအတွက်။”
ဘဏ်တွေအနေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြည်ပ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လာတဲ့ တရားမဝင် ဟွန်ဒီငွေလွှဲပို့ သူတွေနဲ့ ဈေးကွက်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော ဟွန်ဒီတွေက ငွေလွှဲတဲ့အခါမှာ စိတ်ချရမှု ရှိပေမဲ့ ငွေလွှဲခ ဈေးကြီးတဲ့အနေအထားမှာတော့ ရှိတယ်ဆိုပြီးလည်း သူက ပြောပါတယ်။
“ဟွန်ဒီသမားက သူ့အတွက် အမြတ်ချန်ပြီးတော့ ငွေဈေးကို သတ်မှတ်တယ်။ ဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာ ဒေါ်လာဈေး ဘယ်လောက်ပေါက်သလဲတော့ ကျနော် မသိဘူး။ ဒီနေ့ ကွာလာလမ်ပူမှာ ငွေဈေးက မလေးရှား တစ် ရစ်ဂစ်ကို ၂၂ ကျပ်ပေါက်တယ်။ ဒါက ရန်ကုန်ကို။ မော်လမြိုင်၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူဘက်ကို လွှဲမယ်ဆိုရင် လွှဲခဆိုပြီးတော့ ရစ်ဂစ် ၁ဝ ကျနော်တို့ ထပ်ပေးရတယ်။”
မြန်မာ အလုပ်သမား သန်းနဲ့ချီ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း လစဉ် ဘတ်ငွေ သန်းနဲ့ချီ ပြန်ပို့ငွေတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် တကယ်လို့ ပြည်တွင်း ဘဏ်တွေကသာ ထိထိရောက်ရောက် ငွေလွှဲတဲ့ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားငွေ စီးဝင်မှု ပိုများလာမယ့် အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လို့ တရားမဝင် ငွေလွှဲတဲ့ ဟွန်ဒီတွေက ကျေးရွာတွေအထိ အိမ်တိုင်ရာရောက် ငွေပို့ပေးနိုင်ပေမဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေကတော့ မြို့ကြီးတချို့မှာပဲ ဘဏ်ခွဲတွေ ရှိနေသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ငွေလွှဲပို့နေရတဲ့ အနေအထားကိုတော့ အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူ ကိုကျော်သောင်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
“မြန်မာ အလုပ်သမား တစ်ယောက်ဟာ တစ်လရက်ပေါင်း ၃၀၊ ငွေ ၆,၀၀ဝ ဆိုပြီး တွက်လို့မရဘူး။ အဲဒီအတွက် ၅,၀၀ဝ ပဲ ထားပါဦး။ ပုံမှန်အားဖြင့် တွက်လို့ရှိရင် ဘတ် ၃,၀၀ဝ မပို့နိုင်ဘူး။ ၂,၀၀ဝ လောက်ပဲ ပို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ဒီမှာ မြန်မာအစိုးရ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုတဲ့ ကိန်းဂဏန်း ၂ သန်းနဲ့ပဲ တွက်မယ်။ ကျနော်တို့ စောစောကပြောတဲ့ ဘတ် ၂,၀၀ဝ မျိုး၊ ၃,၀၀ဝ မျိုး ဆိုတာကို ထားလိုက်။ မြန်မာတစ်ယောက်ကို အနည်းဆုံး ဘတ် ၁,၀၀ဝ လောက်ကတော့ ပို့တယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီ ဘတ် ၁,၀၀ဝ ကို လူ နှစ်သန်းနဲ့ ပို့မယ်ဆိုရင် သန်းပေါင်း နှစ်ထောင် ဆိုတော့ ဘတ် နှစ် ဘီလီယံ ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ အဲဒါ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် အများကြီးပဲ။ ဒါဟာ အနည်းဆုံး တွက်ချက် ချက်ပဲ ဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ နည်းတော့ငွေကြေးတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။”
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ကတော့ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေ ဘဏ်တွေကနေ တရားဝင်ငွေလွှဲလာရင် အမျိုးသားဝင်ငွေကို အလွယ်တကူ တွက်ချက်နိုင်မယ်၊ ဒါ့အပြင် ငွေလွှဲတာမှာလည်း လုံခြုံ စိတ်ချရမှု ရှိလာမယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရင်က ကောက်ခံနေတဲ့ ပြည်ပထွက်ခွာ အလုပ်လုပ်သူတွေ ပေးဆောင်ရတဲ့ ဝင်ငွေခွန်ကိုလည်း လာမယ့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကစပြီး ပယ်ဖျက်မယ်လို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ကြေညာထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြည်ပငွေလွှဲပို့ လုပ်ဆောင်မယ့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေ အနေနဲ့ ဘယ်လိုစနစ်နဲ့ ငွေလွှဲပို့ လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုတာနဲ့ ဘယ်တော့ စပြီး လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ်တော့ ထွက်ပေါ်မလာသေးပါဘူး။
Master .. Visa ကဒ်တွေ သုံးလာပြီးတဲ ့နောက် ဒီလိုပဲဖြစ်သင့်ပါတယ် .. ပိုက်ဆံတွေသယ်သွားစရာမလိုပဲ အလွယ်တကူ မြို ့တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ ငွေထုတ်ယူနိုင်တာမျိုး .. ကဒ်နဲ ့ဈေးဝယ်ဘာဝယ် သုံးနိုင်တာမျိုး တွေ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ဆောင်နေကြတာ တော်တော်ကြာပါပီ .. မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒါမျိုးတွေလုပ်ခွင့်ပေးလာတာကိုလဲ ကြိုဆိုပါတယ် .. ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ .. မန္တလေးမှာတောင် ATM တွေရှိပီလားမသိဘူးနော် ..
ဖြစ်လည်း ဖြစ်သင့်တယ် … ရှိလည်း ရှိသင့်ပါတယ် .. ။ နိုင်ငံခြားငွေ တရားဝင် လက်ခံ ၊ လဲလှယ်ခွင့် ပေးနိုင်မယ့်ဘဏ်မျိုးများများပေါ်ပေါက်သင့်ပါတယ် … ။ အရင်ကဆို .. .လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လျှင် နိုင်ငံခြားက ဘဏ်တွေမှာပဲ အကောင့်သွားဖွင့်ကြတယ် … နိုင်ငံတကာကိုလည်း ငွေလွှဲလျှင်လည်း … documentation အဆင့်ဆင့်နဲ့လွှဲကြတယ် … အခုလို တရားဝင်ငွေလွှဲနိုင်မယ့် ဘဏ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတော့မယ်ဆိုတော့…. လုပ်ရကိုင်ရပိုအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် … ။ ဒါပေမယ့် .. ဘယ်လိုချမှတ်ထားတဲ့ …. စည်းမျဉ်းဘောင်တွေကြားမှာ လွှဲခွင့်ပေးမှာလဲ …ဆိုတာကတော့ .. စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ … ။
2011 က ကုန်ခါနီးလေ ကောင်းလေ ဖြစ်နေပီ